गर्मी को लागी ब्राउनी को नयाँ सम्पादकीय: क्रश | बेजिया
गर्मी को लागी ब्राउननीको नयाँ सम्पादकीय: क्रस
मारिया vazquez | | मैले के लगाउने?
सामान्यतया ब्राउनी प्रस्तावहरू ताजगी र जीवन शक्ति प्रसारण र जुन हामीले उसको नयाँ सम्पादकीयमा फेला पार्न सक्छौं त्यो कुनै अपवाद छैन। मर्सिडीज ओर्टेगा र जुआन मोरेराको हातले बनाएको यस ब्रान्डले यसको नयाँ स time्ग्रह कालमयी क्लासिक्समा कपडाहरूसँग जोडिएको छ जुन छापिएको सत्तरको प्रेरणाको साथ हो।
सबै गर्मीमा कान्छीहरुका लागि ब्राउन एक ठूलो विकल्प हुन्छ, यद्यपि हामी यसको संग्रहमा वस्त्रहरू पनि फेला पार्न सक्छौं जुनका लागि आदर्श हो स्वतन्त्र र आराम संग गर्मी को मजा लिनुहोस्। दौडको लागि लुगा, समुद्री किनारमा टहलँदै, साथीहरूसँग खानाको मजा लिने वा ग्रामीण इलाकाको यात्रामा।
3 Ibizan सेतो
ब्राउन पोशाकहरू यस गर्मीमा उनीहरूको विशेषता हो ढाँचा र crochet विवरण। लामो पैटर्नको साथ लामो, बटन, लामो बाहुला हरियो पोशाक स the्ग्रहमा सम्भवत सबैभन्दा उल्लेखनीय मध्ये एक हो। तिनीहरू पुष्प प्रिन्टहरू वा विचि वर्गका साथ ती अनुसरण गरीरहेका छन्।
यस गर्मीमा स्पेनी फर्मको संग्रहमा क्रोचेटको ठूलो भूमिका छ। हामी यसलाई फेला पार्दछौं जस्तो कि हामीले पहिले नै लामो पोशाकहरूको निकायमा, दुवै मुद्रित र सादा माथि, बहु रंगीन धारीदार स्कर्टमा, र साथै पनि उल्लेख गरिसकेका छौं। दुई-टुक्रा सेटमा मा कढ़ाई सर्ट र शीर्ष बाट बनेको छ, एक पूर्ण प्रवृत्ति!
गर्मीको संग्रहमा सेतोको कहिल्यै अभाव हुँदैन। को लागि यस संग्रह मा ब्राउनी बेट कढ़ाई विवरण सहित स्कर्ट flared, र V- नेक ब्लाउज बोहो एयरको साथ। वस्त्रहरू जुन छापिएको ढाँचाका साथ अन्य र other्गीन मानिसहरूसँग मिल्न हिचकिचाउँदैन।
थप रूपमा, फर्मले हामीलाई यस ग्रीष्मकालीन बिकिनीको लागि सूर्य र समुद्र तट र सबै प्रकारका सामानहरूको मजा लिन प्रस्ताव गर्दछ। पछि क्र्याब जुत्ता, एक वर्षको यस समयमा आवश्यक छ, पनी crochet टोपी पनि हामीलाई सूर्यबाट र कस्ट्युम ज्वेलरीको एक महत्वपूर्ण संग्रहबाट बचाउनको लागि।
के तपाईंलाई ब्राउनी प्रस्ताव मनपर्‍यो?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » गर्मी को लागी ब्राउननीको नयाँ सम्पादकीय: क्रस
के गर्ने यदि तपाईंको साथीले तपाईंलाई नराम्रो कुरा गर्छ